Sivas Kana Pachave neTUDEMASAS
Abdullah Peker, Sachigaro weTrans and Railway Emp umqes Union, akati kubatana kweTÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ uye TÜVASAŞ uye kudzikisira nekuvharwa kwezvikamu zvitatu izvi. [More ...]
Domestic Freight Wagons Yakaunzwa kune Vadzidzi mukati meDzimba Dzemidziyo Vhiki; Vadzidzi vega veSivas Western Middle Chikoro vadzidzi, Dzimba Dzemidzi Masvondo dzakagadzirwa nekutarisa dzimba dzekutakurwa dzinofamba TÜDEMSAŞ'da yakawana ruzivo nezvedanho rekugadzira. 12 - 18 [More ...]
TUDEMSAS bogies yakashandiswa mune ngoro dzeSwitzerland Wascosa
TÜDEMSAŞ bogies yakashandiswa mune ngoro dzeSwitzerland Wascosa; Ngoro dzekutakura dzinogadzirwa mukubatana neTÜDEMSAŞ-Pakavanzika Chikamu zvakaunzwa kukambani yeSwitzerland. 25 pcs Sgmmnss mhando 40 tsoka dzakagadzirwa neruzhinji-yakazvimiririra sekisheni kushandira pamwe [More ...]
Mafuta anogadzirwa naTÜDEMSAŞ paAustrian Railways
Iwo mabogo akagadzirwa naTÜDEMSAŞ paAustrian Railways; Turkey Railway Machines Industry Inc. (TÜDEMSAŞ) ne H-mhando Y25 bogies kugadzirwa nevanhu nemakambani mitoro njanji makambani riitwe chizvarwa chitsva mitoro mota anoshandiswa guru [More ...]
Kudiwa kubva kuGermany kuenda kuTÜDEMSAŞ yeNew Generation Wagon
Turkey Railway Machines Industry Inc. kwakaita chizvarwa chitsva mitoro ngoro zvinopa makuru makomborero kune opareta anotungamira pfungwa makambani marudzi TÜDEMSAŞ. MuGerman, kambani yeHansewaggon iri kuita bhizinesi rekugadzirisa ngoro, kubva pazuva raigadzirwa, [More ...]
TÜDEMSAŞ's 2020 Budget Kubvumira Inofanira Kuwedzera!
Abdullah Peker, Sachigaro weHak-Union of Transportation uye Railway Vashandi, akataura kuti basa rakapihwa TÜDEMSAŞ rinofanira kuwedzerwa muchirongwa chekudyara kwe2020 yegore uye zvikasadaro TÜDEMSAŞ haigone kugadzira. Vashandi vekufambisa Hak-Sen Genel [More ...]
Kugadziridzwa kweCistern Wagons yeMMSB kuitirwa ku TÜDEMSAŞ
Kugadziridzwa kweCistern Wagons yeBazi reNational Defence ichaitwa muTÜDEMSAŞ. Arif Koyuncu, Musoro weFuel Supply uye Mashandiro eNATO POL Equipment (ANT) yakabatana kune Ministry of National Defense (MSB) naIlhan Maraşlıoğlu, Mutevedzeri weMutungamiri TÜDEMSAŞ [More ...]
International Makambani Kutungamira Railway Sector Kuunganidzwa muKiev
Makambani epasi rese anotungamira chikamu chechitima akasangana kuRailExpo 2019 muKiev, Ukraine. Turkey Railway Machines Industry Inc. (TÜDEMSAŞ) General Director Mehmet Basoglu, Musoro Quality Control Department uye Zühtü Çopur [More ...]
Mota dzaVolkswagen Dzichakwirwa seichi
Turkey locomotive uye Engine Industry se (TULOMSAS), kuti Volkswagen German hofori anotarisirwa kutakura fekitari idzva iri motokari kuti kubudiswa kana hwaizogadzwa Turkey "maviri-storey ngoro" kumumvuri mifananidzo, kekutanga muna HaberTürk ... Pano muTurkey, TULOMSAS ' asi ini [More ...]
TÜLOMSAŞ Inogadzirira Kuvaka Zviviri Zvitoro Wagon yeVolkswagen
Zirume German Volkswagen kuti fekitari mutsva Manisa uchakusimbisa akanyatsojekesa nguva tichigadzirira nokuda chokufambisa rails vamwe zvikamu Turkey, kudzidza chinokosha akazviratidza zvakawanda uye kuchaunza inzwi itsva nyaya iyi. Turkey Locomotives [More ...]
TOUAX technical Team Yakaongororwa kuTÜDEMSAŞ
Touax General Manager Jerome Le Gavrian kushanya kwaTUDEMSAS munaGunyana 5 Nhasi, vashandi vekambani yeTouax, TUDEMSAS - yakaronga kugadzirwa mukushandira pamwe kwakazvimiririra nekambani yakazvimiririra 90 tsoka Sgmmrs mhando dzemotokari [More ...]
Kutakura Zvekufambisa neTrailer muEurope
Mugwagwa uyu wakagadzirwa wakabatana naGökyapı uye TÜDEMSAŞ nekushanyira vamiriri veHelrom, iyo inoita zvekufambisa muEurope neNorth America, uye Mehmet Başoğlu, General Manager weTÜDEMSAŞ, Nurettin Yıldırım, muridzi weGökyapı Company. [More ...]
Vakuru Vakuru Vanouya kuHupenyu muTUDEMSAS
GBS mhando dzakavhara ngoro, izvo zvisina basa muTCDD mota paki, zvinoshandurwa kuva maLgs mhando midziyo ngoro naTTDEMSAŞ ndokudzoserwa kuhupfumi. Inotarisirwa neTÜDEMSAŞ R & D timu, Wagon Kugadziriswa mu2014 [More ...]
TOUAX Inoongorora TCDEMSAS's Freight Wagons
Iine 11 chiuru chemotokari dzinofamba, Touax, kambani yechipiri yakakura kubhadharisa vanhu, yakashanyira TÜDEMSAŞ kuzokurukura zvinodikanwa zvengoro dzekutakura zvinhu zvinoshandiswa mukufambisa kwenyika. Kambani yepasi rose inogara muParis [More ...]